Molybdenum Boride, MoB - Goodao Technology Co., Ltd.
Molybdenum boride wuxuu leeyahay madax adkaansho iyo isugeyn hooseeya oo isdhaafsi, xasiloonida kiimikada, xirashada caabbinta, iska caabbinta daxalka, xirashada iska caabinta, maaddada waxaa loo isticmaalaa isbadalka dusha sare, wuxuu ciyaaraa doorka yareynta xirashada.
Caanaha molecular MoB
Lambarka CAS 12006-099-4
Cufnaanta 9.26 g / cm3
Barta dhalaalida 2280℃
Isticmaala loo isticmaalo sida tungsten elektarooniga ah, aluminium, waxyaabaha lagu daro daawaha 'tantalum'. Canalso waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo filimka duugga u adkaysta iyo qalabka wax lagu duubo ee semiconductor
Waxaa jira laba nooc oo kristal ah: -MoB
Tartanka tetragonal, cufnaanta qaraabada 8.77
-Mob: Rhombic crystal, oo aan degganeyn heerkulka qolka
Xasilloon kor 2000
Cufnaanta qaraabada 10.1
Barta dhalaalida waa 2180 ℃
Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay warshadaha alxanka birta.
Molybdenum boride wuxuu leeyahay madax adkaansho iyo isugeyn hooseeya oo isdhaafsi, xasiloonida kiimikada, xirashada caabbinta, iska caabbinta daxalka, xirashada iska caabinta, maaddada waxaa loo isticmaalaa isbadalka dusha sare, wuxuu ciyaaraa doorka yareynta xirashada. Barta dhalaalka ee molybdenum boride waa 2600 ℃, waxaana loo isticmaali karaa inay noqoto mid lagu buufiyo heerkulka sare. Alloysyo qaas ah oo leh iska caabin wanaagsan, iska caabinta qiiqa, u adkeysiga heerkulka, waxaa loo isticmaali karaa ceramka, xirashada daahan u adkeysanaya, iska caabinta heerkulka sare, dahaarka la isku xoqo, buuxinta dahaadhka buufinta iyo qalabka kiimikada u adkeysata daxalka. Kala-wareejinta birta ku-meel-gaadhka ahi waa bedelka suurtagalka ah ee isku-dhafka adag ee adag iyo walxaha superhard ee codsiyada farsamada. Horumarka sayniska iyo tikniyoolajiyadda, arjiga dalabka molybdenum boride xeryahooda waa la sii ballaadhin doonaa, qalabkani wuxuu muujin doonaa qiime codsi aad u fiican iyo rajo suuq weyn
Hore: Tungsten Boride, WB
Xiga: Budada Tantalum Boride, TaB2
Molybdenum boride daawaha soo saaraha
Warshadaha budada Molybdenum boride
Warshad budada Molybdenum boride
Soosaaraha budada Molybdenum boride
Soosaarayaasha budada Molybdenum boride
Molybdenum boride budada Qiimaha
Quote Molybdenum budada budada ah